Nagu saabsan - Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd.
Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Ogosto 2014 iyada oo caasimad diiwaangashan oo dhan 25 milyan yuan. Iyada oo Xarunteedu ku taal Cheng 'Degmo, Gobolka Hebei, oo loo yaqaan "Saldhigga Kaarboon Waqooyiga Shiinaha", waxay leedahay laba shirkadood oo kala ah: Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd Panzhihua Branch office and Handan Damai Carbon Co., Ltd.
Waqtigan xaadirka ah waxyaabaha ugu waawayn ee shirkadu waa koronto koronto garaafka caadiga ah (75mm-1200mm), koronto koronto garaaf badan koronto (200mm-700mm), koronto koronto heer sare ah (300mm-700mm), koranto laba jibbaaran oo madaxa madaxa foornada ah coke, wakiilka kaarboonka, alaabada garaafka gaarka ah iyo walxaha kaarboon cusub, iwm.
1. Soo saar
Iyada oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo dhan 30,000 tan, waxsoosaarka waxaa si wanaagsan loogu iibiyaa in kabadan 20 gobol gudaha waxaana loo dhoofiyaa dalal iyo gobollo badan sida Mareykanka iyo Japan, iwm.
Wax soo saarka shirkadda waxaa loo soo saaray si adag iyada oo la raacayo heerarka qaranka si loo daboolo heerka u qalmidda wax soo saarka illaa 99.2%. Korontada garaafka waxaa loo iibiyaa inay tahay sheyga ugu muhiimsan ee la doonayo inuu galo kaalinta koowaad ee dhammaan alaabada.
Shirkadeena maareynta tayada oo dhan ayaa si dheeri ah loo jaangooyay, la bini aadamiyay lana casriyeeyay tan iyo markii ay heshay shahaadada nidaamka tayada iyo maaraynta deegaanka ee ISO.
Teknolojiyada R & D
Iyada oo horumarka joogtada ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda, shirkadeena waxay xawaareyneysaa hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed waxayna xoojineysaa maareynta sayniska si loo raaco mabaadii'da "macaamilka ugu horreeya, sumcadda ugu horreysa" waxayna si joogto ah u ballaarisaa qaybta suuqa.
Sanadihii la soo dhaafay shirkaddu marwalba waxay u hoggaansantaa "iyada oo ku saleysan tayada iyo tiknoolajiyada si loo abuuro wax soo saarka iyo adeegyada ugu fiican iyo Tayada ugu horreysa ee ka dhalata baacsiga heer sare iyo hagidda isbeddelada si loo xaqiijiyo wada noolaanshaha iyo guuleysiga" falsafadda ganacsiga.
Adoo diiradda saaraya baahida macaamiisha isla markaana si joogto ah horay ugu sii soconaya raadinta heer sare, Rubang Carbon waxay si tartiib tartiib ah u xoojisay iskaashiga dhaqaale iyo tikniyoolajiyadeed iyo xiriirka ganacsi ee lala yeesho asxaabta iyo sidoo kale macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee dal iyo dibadba.
Su'aalo ma jiraan? Waxaan haynaa jawaabaha.
Iyada oo diiradda la saarayo horumarinta kaladuwan ee alaabada marka laga eego aragtida baahida macaamiisha si loogu sameeyo hal-abuurnimo joogto ah iyo horumarin ku saleysan hubin tayo leh tan iyo aasaaskii shirkadda, waxay horumarisay inay noqoto shirkad kaarboon dhexdhexaad ah oo bixisa qalabka kaarboonka iyo alaabada looga baahan yahay dhinacyo badan.